Aad iyo aad u tiro badan oo Mareykan ah ayaa ku jira xashiishad caafimaad, laakiin isticmaalka ayaan aqbalin hooyooyinka • Daroogada Inc.eu
Aad iyo aad u tiro badan oo Mareykan ah ayaa aqbalaya isticmaalka xashiishka caafimaadka maaddaama gobollo badan oo Mareykanka ka mid ahi sharci ka dhigayaan isticmaalka caafimaadka iyo madadaalada. Codbixinno laga soo qaaday 2018 waxay muujinayaan in 60% dadka Mareykanku ay aqbalaan marijuana in la sharciyeeyo oo ay u aragto inay anshax ahaan u aqbali karto 'geedka cagaaran' (daawo ahaan) in loo isticmaalo.
1 "Waxay sigaar ku cabi jirtaa hareeraha carruurteeda"
2 Caddeyn muhiim ah oo loogu talagalay cawska Medi
3 Cannabis Cannabis iyo Stoner Moms
4 Khamriga iyo cannabis
5 Waalidiintu waa inay ka warqabaan saamaynta marijuana
Si kastaba ha noqotee, aqbalaadan dadwaynuhu ma sii fideyso xashiishadyada isticmaala (dhalinyarada), Business Insider ayaa sidaas yidhi. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah haweenka la wareystay ee isticmaalay xashiishadda xilliga uurka iyo ka dib uurka ayaa u sheegay Insider. Kadib markay noqdeen hooyo, waxay sii wateen adeegsiga. Haweenka qaarkood waxay sheegeen in lagu xukumay isticmaalka marijuana waalid ahaan. Waxay rumeysan yihiin in xukunkan dadka kale uu ka yimid fikradaha qaldan iyo fikradaha laga qabo isticmaalka xashiishka daawo ahaan.
"Waxay sigaar ku cabi jirtaa hareeraha carruurteeda"
Sannadkii 2017, Celia Behar, oo ah 45 jir, lehna laba carruur ah, ayaa u sheegtay Yahoo News in isticmaalka xashiishka ay ka dhigtay 'waalid fiican'. Waxyar kadib, waxay maqashay koox hooyooyin kale ah oo dhigta iskuulka gabadheeda oo ka hadlaya iyada. Mid ka mid ah ayaa soo qaatay maqaalka Yahoo oo wuxuu yidhi, “Waxay halkan ku leedahay gabadh. Waxay sigaar ku cabi jirtaa hareeraha carruurteeda waxayna u maleyneysaa inay fiican tahay. ” Behar wuxuu ku yiri wareysi uu siiyay Insider.
Behar ayaa sheegtay in ay furan tahay isticmaalka cannabis ee ka dhanka ah caruurteeda, laakiin sigaar cabbin geedka agagaarka ah. Waxay sidoo kale jeceshahay sigaarcabka, laakiin waxay ku dhuuqataa qadar yar maalin kasta oo leh habka loogu yeero qalabka isgoysyada. Waxay aaminsan tahay inay taasi ka caawiso xakameynta dareenka walaaca ee soo baxa markii ugu horeysay ee ay sii weynaato.
“Maskaxdaydu waxay ku orodaysaa xawaare aan shucuurtaydu la socon karin,” ayay tidhi. Aniga ahaan, xashiishku wuxuu iga caawiyaa sidii loo xakamayn lahaa shucuurtaas. Waan nasanayaa oo waxaan joojiyaa ka fikirida 9000 oo waxyaalood oo khaldami kara. ”
Caddeyn muhiim ah oo loogu talagalay cawska Medi
Waxaa jira caddeyn la taaban karo oo ah in xashiishadda ay daaweyn karto xanuunka daba dheeraada, lallabbo ay keento kiimiko ku daweynta, iyo astaamaha lagu kala baxo ee sclerosis badan, laakiin kaliya caddeyn dhexdhexaad ama xaddidan oo ah inay u shaqeyneyso xaalado caafimaad oo kale. Tani waxay cadeyn u tahay warbixin ay daabacday 'Akadeemiyadaha Qaranka ee Sayniska' sanadkii 2017. Waa in lagu daraa in cilmi baarista ku saabsan xashiishadda ay xadidnayd muddo dheer caqabado xagga sharciga ah awgood.
Cannabis Cannabis iyo Stoner Moms
Waxa kale oo jira kaftan ku saabsan isticmaalka Behar ee dadka kale: “Markaan maraynno dariiqa oo qofna uu ursado haramaha waxay ku kaftamaan inay aniga tahay. Haddii aan wax ilaawo, waa sababta oo ah waan sarreeyaa. ” Taasi waa wax aan jirin, ayuu yidhi Behar: "Runtii waxaan u isticmaalaa caafimaad ahaan, laakiin dadku waxay u haystaan ​​inaad tahay hooyo caajis ah oo guriga fadhida iyadoo bilaa shaqo ah oo doonaysa in la dhagxiyo."
Hooyo Apie Binkley, oo 33 jir ah, waxay leedahay xukunka dadka kale ayaa ku dhiirrigeliyey iyada inay abuurto Stoner Moms, oo ah beel ku taal Facebook oo leh ku dhowaad 24000 oo raacsan. Apie waxay isticmaashaa qiyaastii laba garaam oo marijuana ah usbuucii, inta badan sigaar cabista, waxayna sheegtay in daroogadu ka caawiso daweynta astaamaha ay u keento ganaca daran ee ku dhaca. Tani waxay u horseedaa lallabo joogto ah oo daran, madax-xanuun daran iyo jahwareer daba-joog ah. Waxay tiri waa fikrad khaldan in dhamaan waalidiinta xashiishada isticmaasha ay dayacan yihiin.
"Carruurtaydu isma ag fadhiyaan oo waxay helayaan 'xiriir sare,' ma lihi bongs u dhigma weelasha ubaxa mana siin doono carruurta deriska ah tallaal," Binkley ayaa u sheegtay Insider email ahaan. "Annagu ma nihin caajis, guryahayaguna ma ahan qashin maxaa yeelay waxaan ku mashquulsan nahay sigaar cabista."
Khamriga iyo cannabis
Labadaba cannabis iyo aalkolo waa walxo keeni kara dhibaatooyin caafimaad oo halis ah. Taasina waa sababta hooyooyinka qaarkood oo Insider ku hadashey, ay u arkaan inay cajaa'ib tahay isticmaalka cannabis ee ka dhexeysa waalidiinta in ka badan bulsho ahaan la aqbalo marka la barbar dhigo khamriga.
- Waa wax bulsho ahaan la aqbali karo in Hooyadu u baahan tahay hal koob oo khamri ah maalin adag ka dib, laakiin haddii aan isla meel ku shidno sababahaa awgood, waxaannu nahay dad daroogo qabatimay oo daroog u ah carruurta, ayay tidhi Maskaxdan muxaafidka ah ayaa diyaar u ah isbedel.
Waalidiintu waa inay ka warqabaan saamaynta marijuana
Sheryl Ryan, oo ah dhakhtarka carruurta ee Milton S. Hershey Medical Center ee Penn State Health, ayaa u sheegay Insider in waalidiintu ay tahay inay ka warqabaan saameynta maaddada nafsiga ah ee weedka, tetrahydrocannabinol (THC). Tani waxay u oggolaaneysaa dadka inay dareemaan hoos u dhac iyo dareenkooda cabsi. Waxay sidoo kale ka digtay in sigaar-cabiddu ay u dhowdahay carruurta. Inkasta oo cilmi-baaristu ay xaddidan tahay, haddana waxaa jira walaac laga qabo in sigaar-cabista sigaarka ay waxyeello u geysan karto carruurta sababtoo ah sunta iyo sigaarka qiiqa, sida uu sheegayo Machadka Qaran ee Xad-gudubka Daroogada.
“Waxaa jira waxyeelo la og yahay iyo saameyn khamri leh oo waalidiinta ay tahay inay ogaadaan. Isticmaalka xashiishka caafimaadka ma ahan inuu khatar galiyo waxbarashada iyo carruurta, ”ayuu yiri Ryan. "Isbarbar dhig si aad ugu cabto shaagagga gadaashiisa."
Akhri qodobada oo dhan ganacsatada.nl (Xigasho)
Fintech ayaa soo jiidatay tareenka marijuana
Fintech waxay ku boodaysaa tareenka marijuana Si tartiib tartiib ah laakiin hubaal, Mareykanka wuxuu aqbalayaa isticmaalka marijuana.
Mediwiet wuxuu siin karaa beeraha Westland raasumaal
Beeraleyda iyo xanaanooyinka Westland ayaa luminaya balaayiin sababtoo ah looma ogola inay koraan haramaha dawada.